Muuqaalada sawirku waxay qaadataa masraxa dhexe ee Han Solo: Sheeko Dagaal Star | Abuurista khadka tooska ah
Marka qorista qoraalku ay aad muhiim ugu tahay filim sida Han Solo: Sheekada Xiddigaha Xiddigaha
Qormooyinkan taxanaha ah ee Star Wars qeybihiisa Waxaan quusinay tan iyo markii Lucasfilm ay heshay Walt Disney, waxaan helnaa soo noqoshada wax yar oo ahaa dhadhankii hore ee filimadii ugu horreeyay ee koonkan uu abuuray George Lucas.
Markan Walt Disney wuxuu dib inoogu soo celinayaa sheekada Han Solo, the Mukhalasiinta lagu yaqaan inuu yahay duuliye u shaqeeya markabkiisa cusub ee dayax gacmeedka: Millennium Falcon. Filin Han Solo ah: sheeko Star Wars ah oo hada ka jileysa teas, trailer iyo sawirro qaab-dhismeedkeeda cajiibka ah.
Es isha noqonaysa dhidibka dhexe si daawadayaashu u soo qaadaan waxaan la kulmi doonnaa filim cusub oo Star Wars ah oo diirada lagu saaray Han Solo. Ereyga "Solo" wuxuu qaataa shibbaneyaal badan oo si xariifnimo leh ayay badeecaduhu ugu suurtagashay inay la jaan qaadaan filimka la sii dayn doono xagaaga
Waa noocaas oo kale oo istaahila in la muujiyo jilaaga hogaaminaya ee Han Solo taas oo qorrax dhac aad u guduudan ay ku faahfaahsan tahay, oo sidaas oo kale jilayaasha intiisa kale ee qaadan doona looxyadooda ayaa muuqda; halkan qaabka "sawirka" ee kii hore ayaa la soo aruuriyay si uu nooga farxiyo sawiro taxane ah oo guul qurux badan leh.
Waxay noqon doontaa atariisho kale, mid ka mid ah jilaayaasha Game of Thrones (halkan shaqo farsamo weyn oo laga abuuray Ireland), taas oo leh qaaday doorkiisa si uu u galo caalamka George Lucas kaas oo ka soo muuqan doona shaashadda weyn bisha May 28, 2018.
Kuwa kale taariikhda lagu calaamadeeyay kalandarka, ka dib markii uu goobjoog ka ahaa bilowgii ciida masiixiga oo ay soo laabteen Luke Skywalker iyo Princess Leia. Caalamka oo umuuqda inuu dabada kujiro sanadaha soosocda aflaam tiro badan oo diirada saari doona jawiyada kaladuwan iyo daqiiqadaha jilayaasha ugu caansan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Marka qorista qoraalku ay aad muhiim ugu tahay filim sida Han Solo: Sheekada Xiddigaha Xiddigaha
Marka sawirku nagu soo celiyo sayidyadiisii ​​weynaa ee rinjiyeynta iyo taa lidkeed